Nooca caalamiga ah ee 'Honor 8X' wuxuu helayaa Android Pie oo ku saleysan EMUI 9 | Androidsis
Nooca caalamiga ah ee 'Honor 8X' wuxuu helayaa Android Pie oo ku saleysan EMUI 9
Horaantii bishaan, Honor wuxuu sii daayay cusbooneysiinta EMUI 9 oo ku saleysan Android Pie waayo Sharaf 8X Shiinaha. Tan ka hor, waxay timid Spain qalabkii. Hada shirkaddu waxay bilowday inay cusbooneysiiso cusboonaysiintaan noocyada caalamiga ah.
Dhowr isbeddel ayaa la socda cusbooneysiintan cusub ee bartamaha-dhexe, oo ay weheliyaan hagaajinno iyo hagaajinno kala duwan. Faahfaahin dheeraad ah hoos.
Cusbooneysiintan EMUI 9.0.1 ee ku saleysan Android Pie wuxuu leeyahay cabir dhan 3.14 GB oo waxay keeneysaa rikoodh maqal ah oo la hagaajiyay, waqtiyo dhaqso ah oo la soo bandhigo barnaamijyo, isdhaafsi adeegsade fudud, iyo Huawei Share 3.0 oo loo yaqaan 'Honor 8X'. Waqtigan xaadirka ah, waxaa lagu soo bandhigayaa Makedoniya, laakiin waxaan fileynaa in si dhakhso leh loo bilaabi doono, maadaama ay diyaar u tahay noocyada caalamiga ah, sidaan horeyba u sheegnay.
Nooca caalamiga ah ee 'Honor 8X' wuxuu helayaa Android Pie oo ka hooseeya EMUI 9 iyada oo loo marayo cusbooneysiin cusub oo software ah
Toddobaadkii hore, Maamuusku wuxuu xaqiijiyay inuu bilaabi doono Android Pie oo loogu talagalay 8X ee Hindiya laga bilaabo Maarso 18laakiin tan iyo waagaas waxba maanaan maqal. Shirkadda ayaa sheegtay inay qorsheyneyso inay soo bandhigto cusbooneysiinta qaybo badan oo bishaan ah, sidaa darteed waxaan rajeyneynaa in cutubyo ka tirsan Hindiya ay helaan ogeysiis cusbooneysiin ah waqti kasta. Si la mid ah ayaa ka dhici lahayd dalal kale.
ARCore hadda waxay la jaanqaadaysaa OnePlus 6T, Xperia XZ3 iyo Honor 8X
Waxaa xusid mudan in la xuso qaar ka mid ah dhinacyada farsamada ee Honor 8X, sida shaashadda 2.5D 6.5-inch oo leh FullHD + xallinta 2.340 x 1.080 pixels (19.5: 9) oo ay ku leedahay darajo ku jirta. Waxay ku fadhidaa 91% wadarta guud ee qaybta hore, waxay la timid shahaadada TUV Rheinland waxaana lagu qabtaa looxyo bir ah.
Dhinaca kale, fuushan a Kirin 710 SoC, kaas oo ku lammaan 4/6 GB oo RAM ah iyo 64/128 GB oo kaydinta la ballaadhin karo ah. Isla mar ahaantaana, waxay leedahay kamarad hore 16 MP (f / 2.0) iyo kamarad 20 iyo 2 MP ah oo gadaal gadaal ah, taas oo la imaanaysa howlaha AI iyo awoodaha duubista dhaqdhaqaaqa oo gaabis ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Nooca caalamiga ah ee 'Honor 8X' wuxuu helayaa Android Pie oo ku saleysan EMUI 9
Sida loogu daro qaab deg deg ah taleefankaaga Android
Soo bandhigida cusub ee Motorola One Vision waxay xaqiijineysaa shaashadeeda daloolka iyo kamarada 48 MP